Web-DL 1080p 6CH – Quality – Burmese Subtitle 6.2
The Final Cut (2004) Set inaworld with memory recording implants, Alan Hakman isacutter, someone with the power of final edit over people's recorded histories. His latest assignment is one that puts him in danger.
Bharat Ane Nenu (2018) Bharat Ane Nenu (2018) မြန်မာစာတန်းထိုး Bharat Ane Nenu (2018) ဇာတ်​ကားဟာဆိုရင်​ အိန္ဒိယနိုင်​ငံရဲ့ အကျင့်​ပျက်​ ခြစားတဲ့ နိုင်​ငံ​ရေးစနစ်​ကို မီး​မောင်းထိုးပြ ရိုက်​ကူးထားတဲ့ အသိပညာ​ပေး ဇာတ်​ကား​လေးတစ်​ကား ဖြစ်​ပါတယ်​... ဇာတ်​ကားထဲမှာ.Bharat ဆိုတဲ့ ​ကောင်​​လေးက မိခင်​ကို ​ပေးထားတဲ့ကတိအတိုင်း သမာသမတ်​ကျတဲ့ နိုင်​ငံ​ရေး အကြီးအကဲတစ်​​ယောက်​ ဖြစ်​လာခဲ့ပါတယ်​ တစ်​ဖက်​မှာ Damu ဆိုတဲ့ လူက နိုင်​ငံအကြီးအကဲ​တွေကို ဖားပြီး ​ကျေးရွာ​တွေမှာ ရမ်းကားချင်​တိုင်း ရမ်းကားတယ်​ ဖြစ်​ချင်​​တော့ သူ့သားက MLA​ရွေး​ကောက်​ပွဲမှာ ​ရွေး​ကောက်​ပွဲ ကိုယ်​စားလှယ်​ဖြစ်​သွား​တော့ ပိုဆိုးသွားတာ​ပေါ့ သူတို့ရဲ့ နှိပ်​စက်​မှုဒဏ်​ကို မခံနိုင်​တဲ့ ရွာသား​တွေက ဝန်​ကြီးချုပ်​ Bharat ကို အကူအညီ​တောင်းရင်းက.... (ဘာ​တွေ ဆက်​ဖြစ်​မလဲဆိုတာ ဇာတ်​ကားသာ ကြည့်​လိုက်​​တော့) ပြီး​တော့ ဝန်​ကြီးချုပ်​ Bharat ကလဲ အိန္ဒိယနိုင်​ငံရဲ့ တစ်​ဖက်​ပိတ်​နိုင်​ငံ​ရေးဝါဒကို ​ခေါင်း​ဆောင်​​ကောင်း ပီသစွာ ...
IMDB: 8.0/10 13,019 votes
Detective K: Secret of the Living Dead (2018) BS ပရိတ်သတ်တွေအတွက် ဒီတစ်ခါ မိတ်ဆက်ပေးချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းကတော့ “Detective K: Secret of the living dead”ဆိုတဲ့ ကိုးရီးယား adventure comedy ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်.. starring အနေနဲ့တော့ “Descendants of the Sun” “Fight for my way”စတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ နာမည်ရလာတဲ့ မင်းသမီးချောလေး Kim Ji Won ဖြစ်ပါတယ်.. ဇာတ်အိမ်က သရဲသွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်အကြောင်းတည်ထားပြီး လူသတ်မှုသဲလွန်စကို စုံစမ်းရတဲ့ Crime အမျိူးအစားဆိုတော့ ပရိတ်သတ်စိတ်ဝင်စားမယ်လို့ အာမခံပါတယ်..အညွှန်းဖတ်ရှူကြပါဦး… အညွှန်း- မှောင်မိုက်တဲ့ညတစ်ည လူတစ်ယောက် စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုင်ပြီး တောနက်ထဲ ထွက်ပြေးလာပါတယ်… သူ့နောက်လိုက်လာတဲ့ လူတွေကလဲ အများကြီးရယ်… ဒီလူကမြေတူးပြီး အလောင်းတစ်လောင်းဖော်လိုက်တယ်.. ဒီအလောင်းက နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီမို့ ဆွေးမြေ့ပြီး အရိုးခြောက်ဖြစ်နေပါပြီ..အဲ့လူက သူ့လက်ကို သူကိုယ်တိုင်ဓားနဲ့လှီးပြီး သွေးတွေကို အရိုးခြောက်အလောင်းပေါ်မှာ စီးစေတယ်…ဒီအချိန်မှာပဲ သူ့နောက်ကလိုက်တဲ့သူတွေသူ့ကို ...